Disk Driers ASTW Fishmeal Plants A & S Thai Works Co.,Ltd www.asthaiworks.com
�လည်ပတ်နိုင်သော အပြားပါသည့် အခြောက်ခံစက်များ�
A & S Thai Works ကုမ္ပဏီလီမိတက်(ASTW) သည် အာရှတွင် အကြီးမားဆုံးသော အရည်အသွေးမြင့် ငါးမှုန့်အစာထုတ်စက် ထုတ်လုပ်သူဖြစ် သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင်အခြေစိုက်၍ ခေတ်မှီဆန်းပြားပြီး ပြည့်စုံသည့် ငါးမှုန့်အစာထုတ်စက်များကို ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
(၂၉)နှစ်ထက်ပိုသော အတွေ့အကြုံများဖြင့် ASTW သည် အရှေ့တောင်အာရှ၊ ပစိဖိတ်ဒေသ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ သြစတေးလျနှင့် နယူးဇီလန်တို့တွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် စက်ပေါင်း (၂၅၀) ကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခင် Atlas Stord Thailand ပိုင်ကုမ္ပဏီည် လက်ရှိတွင် ထိုင်း၊နော်ဝေး၊သြစတေးလျ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်။ (ယခင် Atlas Stord သည် ၁၉၉၈ တွင် ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်)
ASTW ၏ ရိုတရီ အခြောက်ခံစက်/ချက်ပြုတ်စက်များသည် အဆင့်မြင့်ငါးမှုန့် အစာထုတ်စက်များ ထုတ်လုပ်သော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး supplier ဖြစ်သော Stord Bartz မှနည်းပညာကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ နာမည်ကြီး ဥရောပ ဒီဇိုင်းကိုအခြေခံရွေ့ ပြုလုပ်ထားသော အဆစ်ပါသော လည်ပတ်နိုင်သော အပြားပါသော ရေငွေ့ အပူပေး အခြောက်ခံစက် များကို ကမ္ဘာတ၀ှမ်း အလုံးပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချပြီးဖြစ်ပါသည်။
ASTW ၏အခြောက်ခံစက်/ချက်ပြုတ်စက်စွမ်းအင်မှာ တစ်နာရီပျှမ်းမျှ (၄.၅ တန်) မှ (၂၄ တန်)အထိထုတ်လုပ် �နိုင်သည်။
ASTW� မှ အမှုန့် ကြိတ်စက်များကို အစအဆုံး ဒီဇိုင်းတီထွင် ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်ပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ထုတ် လုပ် ထားသော ဒီဇိုင်း အပြင်၊ ၀ယ်သူ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းများကို သီးခြားဝယ်သူစိတ်ကြိုက် ပစ္စည်းများ အသုံးပြု ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
စက်များမှာ ခေတ်မှီသောဒီဇိုင်း ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်သော နည်းပညာကို အသုံးပြု ထားသည့် အတွက် လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနိမ့်ခြင်း၊ ထိမ်းသိမ်းရန် လွယ်ကူခြင်း တို့ ကြောင့်သက်တမ်းကြာရှည်ခံပါသည်။
ASTW�သည် ထုတ်လုပ်ထားသော အခြောက်ခံစက်များ၊ ဖိစက်များ၊ ကြိုတင်အပူပေးစက်များ နှင့် ထောက်ပံ့ ပစ္စည်း ကိရိယာများ အ၇ည်သွေးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် သုတေသနများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက်စေပါ� သည်။ စက်၏ ဒီဇိုင်းအရည်သွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် စက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စွမ်းနှင့် သက်တမ်း ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
ASTW�ASTW သည် ရောင်းချပြီးနောက် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဈေးကွက်တွင် အပိုပစ္စည်းများကို လည်း ရောင်းချပေးပါသည်။
The TST/AST range covers small to medium size driers/cookers and is characterized by :
�Extra heavy duty design, 44 to 400 square meters heating� surface.
Standard 12 mm discs for carbon steel machines and9or 12 mm discs for stainless machines.
Extra disc tip wear protection available when required.
Extra large "disc pitch" = distance between discs for good material flow
New type jackets as standard for all stainless machines.
Extra strong stainless cladding on unheated (cold) surfaces like endplates
Standard operating steam pressure6bar with9bar as an�option.
Large dome for slow vapour exhaust speed and little carry-over of meal dust.
Generously dimensioned steam equipment for high evaporation
Low electric consumption due to slow rotating rotor without reduction of capacity.
Heavy duty shaftmount gearbox with high safety factor.
Insulation with stainless cladding normally included.
Other options available to suit the customers requirements.
Replacement rotors for older TST 20, TST 30, TST 40, TST 60,TST 90, TST 100 driers/cookers available.